अहिले मधेसलाई पनि मदिरामुक्त बनाउने कुरो चल्न थालेको छ । प्रदेशका माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले वीरगंजमा प्रदेशलाई मदिरामुक्त बनाउने विषयमा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ । अहिले प्रदेश सरकारले मदिराको पसलको तथ्यांक प्रदेशका आठवटै जिल्लामा संकलन गरिरहेको र तथ्यांक आइसकेपछि निरुत्साहित पारिने बताउनु भएको छ । कानुन बनाएर केही महिनामा प्रदेशलाई मदिरा निषेधित बनाइने बताउनु भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश दुईलाई मदिरा निषेधित प्रदेश बनाउने कुरा सार्वजनिक गरेपछि अहिले यस सम्बन्धमा बहस सुरु हुनु स्वाभाविक हो । कानुन बनाएर प्रदेश सरकारले केही महिनामा नै प्रदेशमा मदिरामाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुराले एक किसिमले नयाँ तरंग ल्याएको छ ।
मधेसको अनन्य छिमेकी बिहारमा मदिरा निषेधित छ । केही वर्ष पहिले बिहारको वर्तमान सरकारले नै बिहारमा मदिरा निषेध गरेको थियो । मदिराको निषेधको केही क्षेत्रबाट नकारात्मक प्रतिक्रिया पनि आएको थियो । मदिराको उत्पादनका लागि खोलिएका उद्योगहरु तथा बिक्री वितरणका लागि खोलिएका पसलहरुमा गरी अरबाँैको लगानी थियो । यसै गरी राज्यलाई करोडौँ राजस्व पनि प्राप्त भइरहेको थियो । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा हजारौँले रोजगार पनि प्राप्त गरेका थिए । तर मदिरा निषेध गर्ने कुराको भने व्यापक समर्थन पनि भएको थियो । समाजमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरिएको थियो र समाजमा पर्ने सकारात्मक असरको विश्लेषण गरिएको थियो ।अहिले मधेसलाई पनि मदिरामुक्त बनाउने कुरो चल्न थालेको छ । प्रदेशका माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले वीरगंजमा प्रदेशलाई मदिरामुक्त बनाउने विषयमा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ । अहिले प्रदेश सरकारले मदिराको पसलको तथ्यांक प्रदेशका आठवटै जिल्लामा संकलन गरिरहेको र तथ्यांक आइसकेपछि निरुत्साहित पारिने बताउनु भएको छ । कानुन बनाएर केही महिनामा प्रदेशलाई मदिरा निषेधित बनाइने बताउनु भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश दुईलाई मदिरा निषेधित प्रदेश बनाउने कुरा सार्वजनिक गरेपछि अहिले यस सम्बन्धमा बहस सुरु हुनु स्वाभाविक हो । कानुन बनाएर प्रदेश सरकारले केही महिनामा नै प्रदेशमा मदिरामाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुराले एक किसिमले नयाँ तरंग ल्याएको छ ।हो, मदिराको उत्पादन, ओसारपसार र बिक्री वितरणसम्म धेरैले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्, धेरैको लगानी रहेको छ र देशलाई राजस्व पनि आइरहेको छ । मदिराले गर्दा राम्रै आय देशलाई भइरहेको सन्दर्भमा मदिराको सम्पूर्ण कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउनुलाई केहीले यहाँ पनि नकारात्मक रुपमा प्रस्तुत गर्न सुरु गर्छन् । विज्ञानले के भन्दछ भने हरेक क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ । हरेक प्रतिक्रियाबाट अर्को प्रतिक्रिया निस्कन्छ । क्रिया र प्रतिक्रियाको क्रम चलिरहन्छ । जति धेरै ठूलो क्रिया हुन्छ, उति धेरै ठूलो प्रतिक्रिया पनि हुन्छ । यसले गर्दा प्रतिक्रियालाई देखेर क्रिया गर्न रोक्नु हुँदैन । क्रियाले नै प्रतिक्रिया जनाउने हो । प्रतिक्रिया सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हुन सक्छन् । कहिले सकारात्मक प्रतिक्रिया धेरै ठूलो हुन सक्छ त कहिले नकारात्मक प्रतिक्रियाको आकार ठूलो हुन सक्ला । प्रतिक्रियाको आकार नापेर राम्रो कामलाई विराम दिनु हुँदैन । समाजको विकासको लागि जहिले पनि राम्रो काम गर्नेहरुले कहिल्यै हार मानेका छैनन् ।कतिपयले भन्ने गरेका छन् – सूर्य अस्त नेपाल मस्त । बिहारमा मदिरामाथि प्रतिबन्ध लागेपछि बिहारसित सिमाना जोडिएका गाउँ, टोल तथा सहर र बजारहरुमा निकै धेरै मात्रामा मदिरा कारोबारमा वृद्धि भयो । मदिरा बिक्री गर्ने छाप्रे पसलहरु धेरै खोलिए । कैयाँै पसल त सिमापारिबाट आएका बिहारका नागरिकहरुले नै खोले । सानातिना छाप्रे मदिरा पसलका धेरै कथाहरु सञ्चार माध्यमहरुमा आए । दिउँसै पिएर बाटोमा लडेका, कतिपयको मृत्यु भएको, कतिपयले झगडा गरेको र कतिपयले अन्य अपराध गर्ने गरेको पनि सञ्चार माध्यममा नआएको होइन । मदिराको कारणले चोरी, मारपिट तथा अन्य अपराधका घटनाहरु भइरहेका छन् । मदिराको खुल्लमखुल्ला बिक्रीमा बालबालिका पनि संलग्न रहेको देखिएको छ । सोह्र वर्ष उमेर नपुगेका मानिसहरुले मदिरा पसलमा बसेर दिनभरि मदिरा बेच्ने गरेको, मदिराकै लागि सञ्चालित होटलमा साना बालकहरुले ग्राहकलाई मदिरा दिने गरेको तथा सानै उमेरदेखि मदिरा सेवन गर्न थालेको पाइएको छ । सानो उमेरमै मदिराको लत परेपछि उनीहरुको भविष्य कस्तो होला भन्ने विषयमा समाजले कमै विचार गर्ने गरेको छ । धेरै बालबालिकाले मदिराको पसलमा आफ्नो जीवन चलाउने नाउँमा आफ्नो जीवनलाई बर्बाद पारिरहेका छन् ।जुनसुकै सानो बजारमा अरु कुनै पसल होओस् कि नहोओस् तर मदिरा पसल भने अवश्य हुन्छ । मदिराको कारोबार खुल्ला रुपमा हुने गरेको छ । मन्दिरहरुमा बरु फूल, अबिर तथा प्रसाद अबेरसबेर पाइन्न तर सबै ठाउँमा मदिरा पाइन्छ । जुनसुकै वेला र जहाँसुकै सजिलै पाइने भएकोले मदिराका सेवनकर्ताहरुमा भने यसको बानीबारे अनेक व्यवहारहरु बसेका छन् । कुनै पनि उत्सव वा पार्टी मदिराबिना हुँदैन । सबै किसिमको खुसीमा पनि मदिरा चाहिन्छ । कुनै चिन्ता वा पीरलाई कम गर्ने औषधिको रुपमा पनि मदिराको उपयोग गर्न थालिएको छ । साँझ यसो दुई चारजना साथी बस्यो कि मदिरा चाहिन्छ । मदिरा सेवनको क्रम होटलदेखि घरसम्म र सानो छाप्रोदेखि महलसम्म यसरी खुल्लमखुल्ला भइरहेको छ जसले बालबालिकाको अगाडि कसैले साँच्चै मैले आफ्नो जीवनमा कहिल्यै पनि मदिरा सेवन गरेको छैन भन्दा पत्याउने अवस्था रहेको छैन । अभिभावकहरुले मदिरा सेवन गर्नुलाई संस्कारको रुपमा विकास गरेपछि विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकामा पनि यसको नकारात्मक असर परेको पाइएको छ । सरस्वती पूजाको समयमा पूजा सकिएको भोलिपल्ट विद्यालयस्तरका विद्यार्थीहरुले मूर्ति विसर्जन गर्न जाँदा धेरै ठाउँमा रक्सीले मात्तिएर विद्यार्थी विद्यार्थीबीच झडप हुने गरेको खबर आउने गरेका छन् । विद्यार्थी जीवनमा मदिरा सेवनको बानीले विद्यार्थीको भविष्य कहाँ पु¥याउला भन्ने विषयमा कसै कोहीले चिन्ता व्यक्त गरिएको पाइन्न । केही दशकपहिले एकजना विद्वानले मदिराप्रति व्यंग्य गर्दै भनेका थिए – समाजभन्दा धेरै माथि मदिरा छ । उनले अगाडिको चारतले घरको माथिल्लो तल्लाको सडकतिरको भित्तमा मदिराको विज्ञापन गरिएको तस्बीरतर्फ संकेत गरेका थिए । त्यही सबैभन्दा तल एउटा क्याम्पसको भर्नाको विज्ञापन थियो तथा बीचमा थियो एउटा औषधिको विज्ञापन । मदिराको विज्ञापनले जब शिक्षा र स्वास्थ्यमाथि चढेको देखिन्छ त्यहाँ सभ्यता तथा संस्कृतिको मूल्य के होला ? सभ्यता र संस्कृतिलाई बचाउने काम वर्तमानकै हो । अहिलेको युगमा सबैभन्दा बढी हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिमाथि आक्रमण बढेको देखिएको छ । हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई बिगार्ने धेरै तत्वहरुमध्ये मदिरा पनि एक हो । मदिरा सेवनको बानी परिसकेपछि धेरैलाई यसले उसको चाहनाभन्दा विपरीत काम पनि गर्न लगाउँछ । हाम्रो संस्कृतिका कतिपय जातिमा मदिरा सेवन गर्ने चलन रहेको छैन । कतिपय जातिको परिवारको वंशजमा मदिरा सेवन वंश परम्परादेखि नै वर्जित रहेको छ, मदिरा पिउने इच्छाले सताउन थालेपछि त्यस प्रकारका परिवारका नवयुवाहरुले मदिराकै लागि धर्म परिवर्तन पनि गरेका छन् । धर्म परिवर्तन गरेर यस प्रकारका युवाहरु केही पर्वहरुमा आफूलाई ठूलो सभ्य र सुसंस्कृत रुपमा प्रस्तुत गर्दछन् । मदिरा सभ्यताले समाजलाई बिगार्न थप मदत गर्ने गरेको छ ।स्थानीय तहमा अनियमितता बढ्नुको पछाडि मदिरा संस्कृति पनि रहेको छ । उपभोक्ता समिति निर्माण होओस् चाहे विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको गठन होओस्, त्यहीँ साँझ रमाइलो गर्ने नाममा, खुसी मनाउने नाममा तथा आफ्ना विरोधीहरुलाई आफ्नो शान देखाउने नाममा मदिराको खोला नै बगाउने चलन बनिसकेको छ । पहिले नै मदिराको खोला बगाउने चलनले विकासको कुन शुभ सुरुआत हुने आशा गर्न सकिन्छ र ? जुन समाज र संस्कृतिमा मदिरा पहिले गाउँभन्दा टाढै राखिन्थ्यो, मदिरा सेवन गरेकालाई गाउँमा पस्न दिँदैनथ्यो, मदिरा सेवन गर्नेलाई समाजले हेय दृष्टिले हेरिन्थ्यो त्यहीँ समाजमा मदिरा सेवन नगर्ने मानिसलाई नै उल्टो हेय दृष्टिले हेर्ने गरेका छन् । समयको यो उल्टो नदी बगेको समयलाई प्रदेश सरकारले राम्ररी चिनेको छ । विगतमा माओवादी द्वन्द्वको समयमा माओवादीले केही ठाउँलाई मदिरा निषेधित बनाएको थियो । माओवादीको डरले केही गाउँ तथा क्षेत्रहरुमा जुवा खेल्ने र मदिरा बिक्री वितरण गर्नेहरु लगभग हराइसकेका थिए । तर अहिले फेरि पुरानै थिति कायम भएको छ । वर्तमान परिवेशमा कसैलाई कोहीसित कुनै डर छैन । यसकारण प्रदेश सरकारले मदिरामाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरा चल्न थालेपछि यस विषयले चर्चा पाइसकेको छ । प्रदेश सरकारले मदिराको कारणले मधेस के कति पछाडि परेको छ भन्ने कुरो राम्ररी बुझेको छ । मदिरामाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुराले मदिरा सेवन नगर्नेहरुमा खुसी त आएको छ नै, साथमा महिलाहरुमा पनि सकारात्मक सन्देश गएको हुनुपर्छ किनभने मदिराको सेवन धेरै हुने परिवारमा सबैभन्दा बढी पीडित महिला नै हुने गरेका छन् । मदिरा सेवनले धेरैको घर बर्बाद भएको छ । अबको दिनमा मदिराकै कारणले कुनै परिवारमा कुनै किसिमको विचल्लीको सामना गर्न नपरोस् । मदिरामा गरिएको लगानीको क्षेत्र परिवर्तन गर्न सकिन्छ । मदिराबाट राज्यलाई हुने आयको बाटो अर्को हुन सक्छ । मदिराले यदि समाजलाई नोक्सानी पु¥याइरहेको सत्य हो भने नोक्सानी पु¥याउने कुराबाट राज्यले राजस्व उठाइरहनु भनेको समाजमा विकृति बढाउने तत्वलाई नजरअन्दाज गर्नु बराबर हो । समाजमा हुने सबै विकृतिमध्ये कम्तीमा दश प्रतिशत विकृतिको कारणको सम्बन्ध कुनै न कुनै रुपमा मदिरासित रहेको छ । मदिरा खाएर बोलेको थियो, मदिरा खाएको झोंकमा के के भन्न पुगेँ थाहै छैन जस्ता पक्षहरु समाजमा स्वीकार गरिन थालिएको छ । मदिरा सेवन गर्नेले जे भनिदिए पनि वा अलिकति गल्ती नै गरिदिए पनि सहने समाज भइसकेको छ । मदिरा सेवनकर्ताले गल्ती गर्छन् भन्ने सामान्य मनोविज्ञान स्थापित भइसकेको छ समाजमा । मदिरा सेवनकर्ताले मदिरा सेवन नगर्नेमाथि बोली, वचन वा व्यवहारले पु¥याउने आघातको हर हिसाब समाजले राख्न सकेको छैन । अझ बरु ठूला पार्टीहरुमा मदिरा सेवन नगर्ने नै असम्भ कहलाउन थालेका छन् । अलि पुरानो सोचका हुनुहुन्छ भने आदरपूर्ण शब्दमा उपेक्षापूर्ण व्यवहार सबैका अगाडि सहनुलाई समाजले सामान्य रुपमा लिन थालेको छ । सडक दुर्घटनाको क्षेत्रलाई हेरौँ त । सडकको दुवै छेउमा बग्रेल्ती खुलेका होटलहरुमा मदिरा नपाउने कुनै होटल होला र ? बिहानैदेखि मदिरा सेवन गर्ने, अबेर रातिसम्म मदिरा सेवन गर्ने क्रम चलिरहन्छ । मदिरा सेवन गरेर सबारी साधन चलाएर अनाहकमा ज्यान गुमाउने, अंगभंग हुनेहरुको संख्या वर्षेनी हजारभन्दा बढी होला । सबैलाई रोक्ने एकमात्र उपाय भनेको मदिरामाथि प्रतिबन्ध लगाउनु नै हो ।मदिरालाई रोक्दैमा सबै सामाजिक विकृति रोकिन्छ भन्ने होइन तर धेरै किसिमका विकृतिमा भने कमी अवश्य आउँछ । यसले सबैभन्दा बढी महिलालाई सुरक्षित बनाउँछ । घरभित्र हुने महिला हिंसाको घटनामा कमी आउँछ । पारिवारिक स्वास्थ्यको गुणस्तरमा वृद्धि हुन्छ । कतिपय अवस्थामा घरमा बालबालिकाको अगाडि अभिभावकले मुख लुकाएर बोल्नुपर्ने अवस्था आउँदेन । अझ बालबालिकालाई देख्ने गरी कसैले आफ्नै घरमा लुक्ने गरी पिउने काम पनि हुन पाउँदैन । परपाहुनामध्ये कोही पिउने वा कोही नपिउने भएको अवस्थामा घरमा अप्ठ्यारो पर्दैन । धेरै घरमा कम्तीमा सम्पूर्ण परिवार एक ठाउँमा बसेर खाजा खाने अवस्था आउन सक्छ । अझ मदिराको लत परिसकेका विपन्न परिवारहरुमा खुसीको नयाँ लहर छाउन सक्छ । दिनभरि परिश्रम गर्ने र साँझ पर्नासाथ मदिरा पिएर घर पुग्दा बालबालिकाको लागि औषधि लान बिर्सेका अभिभावक घर पुगेर फेरि औषधि किन्न सक्ने अवस्थामा हुन्छन् । दुई पैसा बढी घरमा जान सक्ने हुन्छ । मदिरामा खर्च भइरहेको रकम चाहिँ औषधि र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा खर्च हुन पुग्छ । समग्रमा मानवीय सूचकांकमा वृद्धि हुने अवस्था आउँछ । मानिसहरुको दिनचर्यामा सकारात्मक परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ कि ?